Git Sangit News » दशै मनाएर काठमाण्डौ फर्कनेलाई सरकारको यस्तो आदेश,
विभिन्न ठाउँबाट दशै मनाएर काठमान्डौ आउनेहरुको संख्या बढेसँगै स्वभाविक रुपमा कोरोना सं’क्रमण बढ्ने उच्च जो’खिम पनि रहन्छ । सार्वजनिक यातायातमार्फत् उपत्यका भित्रिनेहरुमा अझबढी संक्र’मण हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । यस्तै सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरिरहेका यात्रुहरुले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना नगर्दा पनि सं’क्रमणको जोखिम बढेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले संक्र’मण बढ्ने जोखिमको आकलन गरेर सरकारले पुर्व तयारी गरिसकेको बताए । हाइ डिपेन्डेन्सी युनिट र आइसोलेसन वार्डको तयारी गरिसकेको पनि उनले बताए ।
संक्र’मणको जो’खिम कम गर्ने पहिलो दायित्व व्यक्ति स्वयमको भएकोले सरकारले कारबाही गर्छु भन्दै ड’र देखाएर जो’खिम कम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । त्यसैले व्यक्ति स्वयंले पनि काठमाडौँ फर्किसकेपछि कम्तिमा एक हप्ता क्वारेन्टाइनमा बस्न सरकारले अनुरोध गरेको पनि प्रवक्ता गौतमले बताए । जनस्वास्थ्यविद् डा. समिरमणि दिक्षितले भने दसैँमा घरबाट फर्किएर काठमाडौं आउनेहरुबाट सं’क्रमण फैलने भन्दा उपत्यका भित्र रहेकाबाट नै संक्र’मण फैलने सम्भावना बढी रहेको बताए । गाउँ भन्दा काठमाडौं उपत्यकामा नै संक्र’मण उच्च भएकोले बाहिरबाट आउनेहरु नै जोगिनुपर्ने बताए ।
काठमाडौंमा संक्र’मणमा नपर्नका लागि नियमित रुपमा मास्क लगाउने, दुरी कायम गर्ने र भिडभाडमा नजाने गर्नुपर्ने दिक्षितको भनाइ छ । जाडो मौसममा घर भित्र खुला वातावरण नहुने भएकाले पनि धेरै सावधानी अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । जोखिम समूहमा पर्ने व्यक्तिहरुलाई जोगाउनका लागि घर भित्रै पनि अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । जाडो मौसम रुघाखोकी लाग्ने समय भएकाले पनि मौसमी रुघा खोकी हो वा को’रोना हो छुट्याउन समुदायस्तरमा नै निःशुल्क परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति १४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १२:४३